ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका के हो?
खोज इञ्जिनबाट कार्बनिक लिंक रस प्राप्त गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिकाहरू गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गरेर हो. समस्या यो छ कि धेरै वेबसाइट मालिकहरू, साथसाथै एसईओ विशेषज्ञहरू, थाहा छैन कसरी ब्याकलिङ्कहरू संगठित गर्न सकिन्छ. तपाईंको सामग्री तपाईंको अप्टिमाइजेसन अभियानको केन्द्रमा खेल्दछ, तर जब सम्म तपाईसँग वफादार अनुयायीहरूको एक विशाल समूह छैन भने तपाईले तपाइँको वेबसाइटलाई SERP मा उच्च स्थान दिनेछैन किनभने यो तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरु लाई हेर्ने छैन जुन तपाईंको साइटमा गुणवत्ता ट्राफिक ल्याउन सक्छ।.
यस आलेखमा तपाई कुनै निश्चित सामग्री सिर्जना नगरी तपाईको साइटमा उत्तम गुणस्तरको लिंकहरू प्राप्त गर्न निश्चित कार्यविधिहरू फेला पार्नुहुनेछ।.
तपाईंको डोमेनमा ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न उत्तम तरिका
तपाईंको अनलाइन व्यवसायको सबै उल्लेखहरू खोज्नुहोस् र ब्याकलिंकहरूको लागि सोध्नुहोस्
यदि तपाईंसँग एक विस्तारित अस्तित्व भएको डोमेन हो र तपाईंको सामग्री पाठकसँग तयार गरिएको छ भने, त्यसकारणले सम्भव छ कि कसैले तपाईंको साइटलाई सन्दर्भको रूपमा उल्लेख गरेको छ।. यद्यपि, प्रायजसो अवस्थामा, तिनीहरू कुनै लिङ्क नगर्दा कसैले कसैलाई उल्लेख गर्दैनन्. तपाईंको काम यी उल्लेखहरू खोज्न र तिनीहरूलाई सान्दर्भिक ब्याकलिङ्कमा बदल्नुहोस्. तपाईं यसलाई वेबसाइट मालिकहरू वा ब्लगरहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको पृष्ठमा तपाईंको व्यवसायलाई संकेत गर्दछ. यदि तिनीहरूले तपाईंको साइटको मूल्य र तपाईंसँग व्यापार सम्बन्धी सम्बन्धमा चासो राख्नुभयो भने, सम्भवतः उनीहरूले तपाइँको प्रस्ताव स्वीकार गर्नेछन्.
तपाईंको डोमेनको बारेमा यी उल्लेखहरू पत्ता लगाउन, तपाइँ विभिन्न पेशेवर उपकरणहरू जस्तै सेमील्ट वेबसाइट विश्लेषक वा मोज वेब एक्सप्लोरर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।. यी उपकरणहरूले तपाईंलाई बताएका सबै वेबसाइटहरू फेला पार्न मद्दत गर्नेछ. तपाईले यी उपकरणहरू खोज्न सक्नुहुनेछ कि एक शब्द वा डोमेन नाम प्रयोग गरेर. हालको उल्लेखहरू पत्ता लगाउन र एक्सेल ढाँचामा प्राप्त डेटा निर्यात गर्न अवधि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाई वेबसाइट वेबसाइट मालिकहरू वा ब्लगरहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले ईमेल वा सोशल मिडिया लिङ्क मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ.
तपाईले पनि Semalt वेबसाइट विश्लेषकबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ कि कुनै विशेष वेबसाइट वा साइटहरूको समूह जुन तपाईंको व्यवसायसँग सम्बन्धित विशिष्ट खोजी सर्तहरूको प्रयोग गर्दछ।.
मृत विकिपीडिया लिङ्कहरू खोज्न र निःशुल्क, उच्च गुणस्तरको लिंकलिङ्कहरू
विकिपीडियामा एउटा हो। संसारमा सबैभन्दा अधिकृत वेबसाइटहरू. यसैले यस स्रोतबाट उत्कृष्ट गुणस्तरको ब्याकलिङ्कहरू आश्चर्य गर्न सक्छन्. तपाईले प्रणाली चलाउन सक्नुहुनेछ र मृत लिङ्कहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ तपाईको साइटबाट सम्बन्धित लिङ्कहरूको साथ. केवल ती लेखहरू चयन गर्नुहोस् जुन तपाईंको आलासँग हो. एक पटक तपाईंले एक विकी पृष्ठ भेट्टाउनुभएको छ जुन तपाईंको टूटाईएको लिङ्कसँग सम्बन्धित उद्योग लेखसँग सम्बन्धित, Ctrl + F थिच्नुहोस् र मृत लिङ्क टाइप गर्नुहोस्. तपाईंको साथ मृत लिङ्क को बदलन को लागी, तपाईंलाई विकिपीडिया मा एक खाता बनाउन को लागी, यस प्रणाली संग लग यिनी गर्न को लागी प्रासंगिक लेख सम्म पुगयो, सम्पादन स्रोत विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस र तपाईंको backlink संग मृत लिंक को बदलन को आवश्यकता.
यो प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि, पृष्ठको तल्लोमा जानुहोस् र सेक्सन छनौट गर्नुहोस् "सारांश सम्पादन गर्नुहोस्. "यहाँ तपाईंले तपाईलाई परिवर्तन गर्नुभएका परिवर्तनहरू वर्णन गर्नुहोस् र बटन थिच्नुहोस्" यो सानो छ सम्पादन "र त्यसपछि" परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस् ". यो सबै हो, अब विकिपीडिया तपाईको डोमेनको गुणस्तर लिङ्क हो, तपाईंको वेब ब्रान्ड प्राधिकरणलाई वेबमा राख्नुहोस् Source .